CIN Khabar देशभरका स्वास्थ्य संस्था पानीको संकट झेल्दै
देशभरका स्वास्थ्य संस्था पानीको संकट झेल्दै मन्त्रालयको दाबी '८१ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा पानीको पहुँच '
गीता चिमोरिया बिहिबार, चैत १४, २०७५, ०१:४२:००
तपाईं बिरामी हुनुभयो भने अस्पताल जानुहुन्छ । डाक्टरहरुका अनुसार बिरामी हुनाको एउटा मुख्य कारण सरसफाइको कमी हो । सरसफाइ पानीसँग जोडिन्छ । तर देशभरीका ७ सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा पानी नै छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा, बुढिनन्दा नगरपालिका २ का ममता दमाइ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोल्टीमा बिरामी लिएर पुग्नुुभएको छ । बिरामीले पानी भन्यो की, दौडेर नजिकैको बजारमा पुग्नुपर्छ । बिहान बेलुका थोरै समय मात्रै धारामा पानी आउने भएकाले बजारका मान्छे पनि खानेपानी दिन खासै मन गर्दैनन् ।
दैनिक ६० देखि ७० जना बिरामी आउने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोल्टीमा बिरामीलाई मात्रै होइन, पानीको अभावका कारण डाक्टरहरुलाई पनि समस्या हुने गरेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा. गणेश चौधरी बताउनुहुन्छ ।
दमाइले भन्नुभयो, ‘पानी छैन भन्छन्, बजारका मान्छे पनि पानी दिन मन गर्दैनन् । हाम्रो घर टाढा हुन्छ, कहाँ जानु ? बिरामी लिएर स्वास्थ्यमा आउँछौ, स्वास्थ्यमा सुविधा छैन ।’
चौधरीले भन्नुभयो, ‘बाहिरबाटै ल्याएर खाइराख्नुभएको छ । अबचाहिँ अलि सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा जाऔं भनिराखेका छौं । सुधार गर्नुपनि पर्नेछ किनकी बिरामी मान्छे सुरुमै बिरामी हुन्छ, त्यसमाथी पर्याप्त पानी भएन भने धेरै नै अप्ठ्यारो हुन्छ ।’
कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट नलगाढ नगरपालिकामा रहेको भगवति स्वास्थ्य चौकीमा दैनिक २५ देखि ३० जनासम्म बिरामी उपचारा लागि पुग्ने गर्छन् । यहाँ छिमेकी जिल्ला रुकुमबाट समेत बिरामी आउँछन् । तर, स्वास्थ्य चौकीमा पानीकै कारण उपचारमा समस्या हुन्छ ।
सिनियर अहेब देवबहादुर सिंह नियमित धारा नआउने गरेको तर आएका बेला पानी थापेर जम्मा गरेर राख्ने गरिएको बताउनुहुन्छ । नजिकैको गाउँबाट पाइप बिच्छ्याएर ल्याइएको पानी कहिले गाउँलेले पाइप चुडाएर उतै भर्न थाल्छन्, कहिले स्वास्थ्य चौकीबाट मान्छे पुगेर जोड्छन् र पानी ल्याउँछन् ।
प्रदेश ३ को काभ्रे तेमालमा रहेको पोखरी नारायणस्थान स्वास्थ्य चौकीमा खानेपानी लिफ्टीङ गरेर ल्याइएको छ । ५/६ दिनमा एकपटक आउँछ । कपडा धुन, शौचालय र अरु कामका लागि भने आकाशबाट परेर जम्मा गरेको पानी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो पानी स्वस्थ हुन्छ त ? स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख ब्रम्ह शाहीले औषधि हालेर प्रयोग गर्ने गरिएको बताउनुभयो ।
शाहीले भन्नुभयो, ‘लिफ्टीङ गरेर ल्याइएको पानी खानका लागि त ठिकै छ, क्लोरिन हालेर प्रयोग गर्ने गरेका छौं । आकाशबाट परेर जम्मा गरिएको पानी खानको लागि त प्रयोग गर्ने गरेका छैनौं ।’ पूरै तेमाल एरियामा खानेपानीको समस्या रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
बर्षमा ३० जनासम्म महिला सुत्केरी हुने नारायणस्थान स्वास्थ्य चौकीमा यसवर्ष २४ जनाले प्रसुति सेवा लिइसकेका छन् । बर्थिङ सेन्टरहरुमा एकजना महिला सुत्केरी हुँदा ३ सय देखि ५ सय लिटर पानी आवश्यक पर्छ ।
बर्थिङ सेन्टरहरुमा एकजना महिला सुत्केरी हुँदा ३ सय देखि ५ सय लिटर पानी आवश्यक पर्छ । स्वास्थ्य संस्थामा हरेक काम गर्दा पानीको आवश्यकता पर्छ । घाउ सफा गर्दा होस् या बिरामीको अन्य जाँच । शौचालय प्रयोगका लागि पनि पानी नभइ हुँदैन ।
स्वास्थ्य संस्थामा हरेक काम गर्दा पानीको आवश्यकता पर्छ । घाउ सफा गर्दा होस् या बिरामीको अन्य जाँच । शौचालय प्रयोगका लागि पनि पानी नभइ हुँदैन । बिरामी निको हुन जाने स्वास्थ्य संस्थाहरु पानीको चरम अभावका कारण आफैं बिरामी हुँदा समेत सरकारले किन चासो नराखेको ? स्वास्थ्य राज्य मन्त्री सुरेन्द्र यादव संघीय संरचनासँगै स्वास्थ्यका सेवाहरुलाई कसरी गुणस्तरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुहुन्छ ।
यादवले भन्नुभयो, ‘अहिले तीन तहको सरकार छ । धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएका छौं । स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सेवा कसरी गुणस्तरी बनाउने भनेर स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्रबीच छलफल भइरहेको छ ।’
देशभर ८१ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा पानीको पहुँच पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ । तर ति स्वास्थ्य संस्थाहरुमा खानेपानीको योजना पुगेको छ, पानी भने पुग्न सकेको छैन । १९ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा त खानेपानीको योजना समेत पुग्न सकेको छैन ।
केही समयअघि कर्णाली प्रदेशका एकसय ७ स्वास्थ्य संस्थामा गरिएको एक अध्ययन अनुसार कुनैपनि स्वास्थ्य संस्थामा २४ सै घण्टा पानी उपलब्ध छैन । ति स्वास्थ्य संस्थामध्ये ९५ प्रतिशतमा शौचालय छ । त्यसमध्ये २६ प्रतिशतमा शौचालय नजिकै वा छेउमा पानी उपलब्ध छैन । र ५३ प्रतिशतमा शौचालयको छेउमा हात धुने ठाउँ समेत छैन ।
कर्णाली मात्रै होइन देशभरी रहेका ४ हजार स्वास्थ्य संस्थामध्ये अधिकांशले पानीको संकट झेलिरहेका छन् । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा सूनिश्चित गरेको छ । तर कागजमा लेखिएको त्यो हक नागरिकले व्यवहारमा उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
सरकारले ३० वर्षदेखि स्वास्थ्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको बताएको छ । तर परिणाम देखिएको छैन ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत १४, २०७५, ०१:४२:००
चिमोरिया सीआईएनमा संवाददाता हुनुहुन्छ।
कोरोना सङ्क्रमण भन्दा निको हुने दर बढ्यो
कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमित घट्दै, सावधानी अपनाउन विज्ञको अनुरोध
४४ लाख मात्रा कोरोना खोप ३ दिनपछि आउँदै
कोरोना सङ्क्रमण स्थिर, जोखिम कायमै
पूर्ण खोप लगाएकामा ९० प्रतिशत एन्टिबडीको विकास
कोरोनाविरुद्धको राष्ट्रव्यापी खोप अभियान आजबाट सुरु
रातो रगतको डरलाग्दो कालो व्यापार
महानगर व्यवस्थित बनाउने योजना बनाउँदै युवा इन्जिनियर
काठमाडौँमा चल्ने गाडीबाट दैनिक तीन करोड ठगी
कृषिमा महिलाको श्रम धेरै, स्वामित्व कम
विप्लवको विध्व‌ंश र शक्तिका स्रोतहरू
मुखको स्वास्थ्य : न नागरिकको ध्यान न सरकारको चासो
कर्णाली समृद्धिको आधारः पर्यटन, जडिबुटी र विद्युत् व्यापार
नीति खोज्दै सामुदायिक रेडियो
देशभरका स्वास्थ्य संस्था पानीको संकट झेल्दै
थप ५ जिल्लामा काँग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गियो
समितिले डोल्पा, सुर्खेत, बाँके, महोत्तरी र सिराहाको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गरेको काँग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशसरण महतले सीआईएनसँग बताउनुभयो । २१ घण्टा
सत्ता गठबन्धनलाई तल्लो तहसम्मै निरन्तरता दिने बारेमा छलफल सुरु
माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले सङ्गठन एक बनाउने बाहेकका काममा सहकार्य गर्ने बारेमा गठबन्धन दलबीच छलफल सुरु भएको सीआईएनसँग बताउनुभयो । आईतबार, असोज १०, २०७८
हिजो १० हजार ५ सय ७९ जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा ९ सय ५३ मा कोरोना पुष्टि भयो भने १३ सय ७१ जना कोरोनामुक्त भएका छन् । आईतबार, असोज १०, २०७८